Facebook မှာ အမုန်းတရားလှုံ့ဆော်နေတာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလ – Tamarmyay.com
Facebook မှာ အမုန်းတရားလှုံ့ဆော်နေတာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလ
Facebook မှာ အမုန်းတရားလှုံ့ဆော်နေတာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖေ့စ်ဘွတ် Facebook လူမှု ကွန်ရက်ကို သုံးပြီး အမုန်းစကား ဖြန့်ချီ လှုံ့ဆော်တာတွေ ရှိ နေတယ်လို့ ကုလ သမဂ္ဂ ရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ယန်ဟီးလီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Marzuki Darusman တို့က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Facebook ဟာ မူလ ရည်ရွယ်သလို မဟုတ်တော့ဘဲ မကောင်းဆိုးဝါးလို ဖြစ်လာနေပြီလို့ ယန်ဟီးလီက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Facebook ပေါ်မှာ ရေးသားမှု တွေကြောင့် မကျေမနပ်မှုတွေ၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သဘောထား ကွဲလွဲတာတွေ ဖြစ်စေတဲ့ အပြင် ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးရာ ကျတယ်လို့ သူက ဆို ပါတယ်။
မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ယန်ဟီးလီ ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းက Facebook ပေါ်မှာ မုန်းတီးမှု တွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆဲဆို ရေးသားနေကြတာဟာ မွတ်ဆလင်တွေကိုသာ မဟုတ်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုလည်း ပြောဆိုတာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမုန်းစကားတွေ၊ မမှန်မကန် သတင်းတွေ ရေးသား ဖြန့်ဝေတာ တွေကို ရင်ဆိုင် နေရတာ ကလည်း မြန်မာ တစ်နိုင်ငံတည်း မဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေမှာ လည်း ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံ အကြီးအကဲတွေ၊ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုလည်း Facebook ပေါ်မှာ ဝေဖန် ပြောဆိုတာတွေ ရှိတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးစွဲသူ သန်း ၃၀ လောက် ရှိနေတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီသုံးစွဲ နိုင်အောင် လေ့ကျင့် ပေးတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ၈ တန်းလောက်ကနေ စတင်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနနဲ့ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ဖို့ကိုလည်း စဉ်းစားနေတယ်လို့ ဦးအောင်လှထွန်းက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အမုန်းစကား ပြောဆိုမှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲနေတာ သိရပေမဲ့ ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်နေတယ် ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
The post Facebook မှာ အမုန်းတရားလှုံ့ဆော်နေတာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ appeared first on Focus Myanmar.
မွနျမာ နိုငျငံမှာ ဖစျေ့ဘှတျ Facebook လူမှု ကှနျရကျကို သုံးပွီး အမုနျးစကား ဖွနျ့ခြီ လှုံ့ဆျောတာတှေ ရှိ နတေယျလို့ ကုလ သမဂ်ဂ ရဲ့ မွနျမာ နိုငျငံ လူ့အခှငျ့အရေး ဆိုငျရာ အထူးသံတမနျ ယနျဟီးလီနဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ အခကျြအလကျ ရှာဖှရေေး အဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျ Marzuki Darusman တို့က ပွောလိုကျပါတယျ။
အခုဆိုရငျ Facebook ဟာ မူလ ရညျရှယျသလို မဟုတျတော့ဘဲ မကောငျးဆိုးဝါးလို ဖွဈလာနပွေီလို့ ယနျဟီးလီက ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Facebook ပျေါမှာ ရေးသားမှု တှကွေောငျ့ မကမြေနပျမှုတှေ၊ ပွငျးပွငျးထနျထနျ သဘောထား ကှဲလှဲတာတှေ ဖွဈစတေဲ့ အပွငျ ပဋိပက်ခဖွဈအောငျ ပံ့ပိုးပေးရာ ကတြယျလို့ သူက ဆို ပါတယျ။
မှတျဆလငျ ဆနျ့ကငျြရေးလှုံ့ဆျောမှုတှေ ရှိနတေယျလို့ ယနျဟီးလီ ပွောတာနဲ့ ပတျသကျလို့တော့ ပွနျကွားရေး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယ ဝနျကွီး ဦးအောငျလှထှနျးက Facebook ပျေါမှာ မုနျးတီးမှု တှနေဲ့ အပွနျအလှနျ ဆဲဆို ရေးသားနကွေတာဟာ မှတျဆလငျတှကေိုသာ မဟုတျဘဲ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ ကိုလညျး ပွောဆိုတာ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အမုနျးစကားတှေ၊ မမှနျမကနျ သတငျးတှေ ရေးသား ဖွနျ့ဝတော တှကေို ရငျဆိုငျ နရေတာ ကလညျး မွနျမာ တဈနိုငျငံတညျး မဟုတျဘဲ ကမ်ဘာ့ နိုငျငံတှမှော လညျး ရှိနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
နိုငျငံ အကွီးအကဲတှေ၊ အစိုးရ ခေါငျးဆောငျတှေ ကိုလညျး Facebook ပျေါမှာ ဝဖေနျ ပွောဆိုတာတှေ ရှိတယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ Facebook သုံးစှဲသူ သနျး ၃၀ လောကျ ရှိနတေယျလို့ ကွားရပါတယျ။
ဆိုရှယျမီဒီယာကို ကငျြ့ဝတျနဲ့ အညီသုံးစှဲ နိုငျအောငျ လကေ့ငျြ့ ပေးတာက အကောငျးဆုံး ဖွဈမယျလို့ ယူဆတဲ့ အတှကျ စာသငျကြောငျးတှမှော ၈ တနျးလောကျကနေ စတငျပွီး ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွနျကွားရေးဝနျကွီး ဌာနနဲ့ ပို့ဆောငျ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာနတို့ ပူးပေါငျး လကေ့ငျြ့ပြိုးထောငျ ဖို့ကိုလညျး စဉျးစားနတေယျလို့ ဦးအောငျလှထှနျးက ပွောပါတယျ။
လောလောဆယျမှာတော့ အမုနျးစကား ပွောဆိုမှုတှကေို ဆနျ့ကငျြတဲ့ ဥပဒတေဈရပျကို သာသနာရေးဝနျကွီးဌာနက ရေးဆှဲနတော သိရပမေဲ့ ဘယျအဆငျ့ထိ ရောကျနတေယျ ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူးလို့ သူက ပွောပါတယျ။
The post Facebook မှာ အမုနျးတရားလှုံ့ဆျောနတော ဘယျလို ကိုငျတှယျမလဲ appeared first on Focus Myanmar.
Previous Previous post: သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေဖို့ဆိုရင် ကနေ့မှစပြီး ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ .
Next Next post: မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဆိုးဝါးနေဆဲလို့ ကုလ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ပြော